यस्तो पो होस उपहार
बुधबार, २२ मंसिर, २०७३ मा प्रकाशित,
माया कामको खोजिबाट फर्किएको तीन दिन वितिसकेको थियो । नयाँ कामको खोजीमा स्थानीय एजेन्सीमा पनि कत्ति धाउनु ? भर्खर मात्र ऊ पनि एजेन्सीबाट नै फर्किएकी हो । शुक्रबार र शनिबार सबैलाई बिदा हुने हुनाले ती दिनहरूमा सय जनाजति मानिसको भीड हुने डेरामा यतिखेर ऊ मात्र एक्ली छ । काम नहुनेहरू मात्र अरू दिन पनि त्यो डेरामा आएर बस्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसैले ऊ मात्र डेरामा थिई । एक्लै भएकीले आज उसलाई भात खान पनि मन लागेन ।
माया कामको खोजिबाट फर्किएको तीन दिन वितिसकेको थियो । नयाँ कामको खोजीमा स्थानीय एजेन्सीमा पनि कत्ति धाउनु ? भर्खर मात्र ऊ पनि एजेन्सीबाट नै फर्किएकी हो । शुक्रबार र शनिबार सबैलाई बिदा हुने हुनाले ती दिनहरूमा सय जनाजति मानिसको भीड हुने डेरामा यतिखेर ऊ मात्र एक्ली छ । काम नहुनेहरू मात्र अरू दिन पनि त्यो डेरामा आएर बस्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसैले ऊ मात्र डेरामा थिई । एक्लै भएकीले आज उसलाई भात खान पनि मन लागेन । घरभित्र त एसी छ, बाहिर भएको घाम र तालु फुट्ने गर्मी भएकाले उसलाई कतै निस्कन पनि मन लागेन । पेट भर्नका लागि पाउरोटी र चिया खाएर ऊ बिछ्यौनामा पल्टिएर एउटा किताब पल्टाएर पढ्न थाली ।
पल्टिएकी मात्र थिइ, मूलढोका बेस्कन ढकढकियो । यो मध्यदिनमा को आयो होला भन्ने सोच्दै ढोका खोल्न गई । ढोका खोल्नासाथ उसकोे शरीर नै थर्र्र काम्यो । ऊ तर्सेर दुई पाइला पछि सर्न पुगी । ढोकाको अगाडि दुईसय किलो जतिको देख्दैमा डरलाग्दो दन्त्यकथाको राक्षसजस्तो कालो अफ्रिकन थियो । ओहो, मानिस यतिसम्म नराम्रा पनि हुँदा रहेछन् । यस्तै मानिसलाई नै राक्षस भन्ने होला ! त्यो कालेलाई देख्दा उसलाई धेरै डर लाग्नुको कारण उसको नाङ्गो जीउ पनि हो । बोसोले थलथल भएको कालो भूँडी । उफ्, कस्तो घिनलाग्दो । उसले एउटा हाफपाइन्ट मात्र लगाएको थियो । त्यो कालेको छेउमा ढोकाको आडमा एक जना अर्को इजरायली केटो पनि रहेछ, जसलाई उसले पछि मात्र देखेकी थिई । ऊ बीसबाइस वर्ष जतिको, दुब्लो पातलो केटो थियो । मैलो सर्ट र जिन्स लगाएको त्यो केटोले जिन्सकै एउटा ब्याग पनि बोकेको थियो । त्यो फुच्चे केटो र काले हिब्रूमा कुरा गरिरहेका थिए । माया इजरायल आएकी त तीनचार महिना वितिसकेको थियो । तर पनि त्यो बेलासम्म उसलाई हिब्रूभाषा बोल्न पनि आउँदैनथियो । अरूले बोलेको पनि ऊ बुझ्दिन थिई । त्यसैले काले र त्यो केटोले के कुरा गरिरहेका छन् भन्ने उसले कत्ति पनि बुझिन । मायालाई देखेपछि फुच्चेकोे अनुहारमा एक प्रकारको चमक देखियो । फुच्चेले मायातिर फर्किएर केके भन्यो । मायाले केही नबुझेकाले ऊ टवाल्ल परी । उसले हिब्रू नबुझेको अफ्रिकनले थाहा पायो होला । उसले मायालाई इसाराले ढोका बन्द गरेर बस भन्यो । मायाले कालेको मौन आदेशको पालना गर्दै ढोका बन्द गरी । बिस्तरामा आएर फेरि किताब पल्टाई ।
दश मिनेटपछाडि फेरि ढोका ढकढकियो । उसलाई त्यही कालेले फेरि ढोका ढकढक्याए होला भन्ने लाग्यो । के जिस्काइरहेका होलान् ? अघि ढोका खोल्न र बन्द गर्न लगाए, अहिले फेरि ढङ्ढङ् । मायालाई बिस्तराबाट उठ्नै मन लागेन । त्यसैले ढोका खोल्नुभन्दा पहिले को हो ? भनेर भित्रैबाट कराई । बाहिरबाट आवाज आयो-पुलिस । ओहो, पुलिस किन आयो ? उसले त पुलिस नै घरमा आउनुपर्ने केही नराम्रो काम त गरेकी थिइन । तैपनि ऊ डराई । उसले ढोका खोली, बाहिर त्यै अफ्रिकन र पुलिस कुरा गरिरहेका थिए । फुच्चे त्यहाँ थिएन । पुलिसले उसतिर हेरेर भन्यो—“तिमीले कसैलाई देख्यौ यहाँ केही समय अगाडि ?” मायाले जवाफ नै दिन नपाई अफ्रिकनले भन्यो-“उनले ढोका खोलिनन् मैले मात्र देखेको हो” । काले र पुलिसले यसपल्ट अङ्ग्रेजीमा बोलेकाले मायालाई बुझ्न गाह्रो भएन । अफ्रिकनको कुरा सुनिसकेपछि पुलिसले उसतिर हेर्दै भन्यो–“गूड, कसैले ढोका ढकढकायो भने सोधेर चिनेपछि मात्र खोल्नु है ।” पुलिस अफ्रिकनसित हात मिलाएर फर्कियो । ढोका नखोल्नु किन भनेको होला ? के कुरा भएछ ? किन सोध्यो पुलिसले ? मायाको मनमा अनेक प्रश्नहरू एकैसाथ आए । तर ऊ कसलाई सोधोस् ? काले देख्दैमा डरलाग्दो छ, त्यसैले सोध्न आँट गर्न पनि सकिन । ढोका लगाएर तुरुन्त भित्र पस्न पनि सकिन–के गरूँगरूँ भयो । आखिर पुलिस किन आयो ? कालेले उसलाई किन ढोका खोलिनन भन्यो ? एकपल्ट त उसले ढोका खोलेकै थिई तर कालेले किन भनेर सोध्न पनि दिएन ? मायाले मन अलि दह्रो बनाई । बाहिरी रूपबाट कालेसित नडराई सोध्ने भनेर आँट गरी । पुलिस फर्किएपछि माया र अफ्रिकनका बीचमा मुस्कानको अभिवादन भयो । मायाको मनमा कौतुहल थियो । त्यसैले मायाले नै सोधी, के भएको हो ? योपल्ट कालेले सेता मोतीका दानाजस्ता दाँत देखाएर हाँस्दै भन्यो-त्यो केटो जो पहिलोपल्ट आएको थियो चोर रहेछ । चोरी गरेर भाग्न लाग्दा पुलिस पछि लागेकाले लुक्नका लागि हाम्रो घरभित्र पसेको रहेछ । कालेले कोठामा पस्न नदिए पछि केटोले नै मायाको ढोका ढकढकाएको रहेछ । उसले पनि ढोका लगाएपछि फुच्चे फर्किइहालेछ । पुलिस त्यसैको खोजिमा आएको रहेछ । ए कुरा त त्यै केटाको रहेछ, बेकार माया डराई मात्र ।
त्यति कुरा भैसकेपछि अफ्रिकनले मायालाई सोध्यो–“इन्डियन ?”उसले मुस्कुराउँदै जवाफ दिई “नो नेपाली ।” मायाको जवाफ सुन्नासाथ उसले जवाफ फर्काइहाल्यो-“आई एम प्रनोन फ्रम अफ्रिका । बट नाउ आई एम इजरायली सिटिजन ।” उसकोे र मायाको गफ आ–आफ्नो ढोका अगाडि उभिएर नै सुरु भयो । केहीबेर उभिएर गफ गरेपछि प्रनोनले मायालाई कफी चियाको निम्तो दियो । मायाले पर्दैन भने तापनि “म चिया बनाउँछु, तिमी तिम्रो ढोकामा ताल्चा लगाएर आऊ ल” भनेर आफ्नो कोठामा पस्यो । मायालाई अप्ठ्यारो पर्‍यो । ऊ अब अलमलमा परी । के गर्ने के नगर्ने । केहीबेर सोचेर ऊ चियाको निम्ता स्विकार्दै आफ्नो कोठामा ताल्चा मारेर प्रनोनको कोठातिर पसी ।
माया मूलढोकाबाट पस्नासाथ उसले प्रनोनको फ्ल्याटमा रहेका तीनवटा कोठा सबै देखी । मूलढोका मात्र लगाइएको थियो । भित्री कोठाका ढोकाहरू सबै खुल्लै थिए । उसका तीनवटै कोठा लथालिङ्ग थिए । सबै कोठा नयाँ र पुराना कम्प्युटर, टिभी, फोनसेटहरू, रेडियो र घडीजस्ता सामानले भरिएका थिए । त्यसमाथि जताततै छरिएका उसका फोहोर कपडाहरूले कोठालाई भँडारकोठाको रूप दिइरहेका थिए । प्रनोनको कोठा हेर्दै लाग्दथ्यो-यो घरमा आइमाई बस्नु त के पसेकी पनि छैन होला । इलेक्ट्रोनिक सामानले भरिएका कोठाहरूको हालत हेर्दा प्रनोन इलेक्ट्रिसियन रहेछ भनेर जान्न मायालाई कत्ति पनि बेर लागेन । प्रनोनले चिया र बिस्कुटले मायाको स्वागत गरेको थियो । चिया पिउँदै उनीहरू गफ गर्न थाले । प्रनोन मायाले सोचेजस्तो इलेक्ट्रिसियन होइन रहेछ, ऊ त होटलको शेफ पो रहेछ ।
मायालाई कम्प्युटर चलाउन आउँथ्यो । ऊ त्यहाँ पनि बेलाबेलामा साइबरमा गएर आफ्ना मेलहरू हेर्दथी । कम्प्युटर देखेपछि उसकोे मनमा के लागेर हो, टेबुलमा राखेको कम्प्युटर देखाउँदै सोधी–“इन्टरनेट छ ?” प्रनोनले घुम्रिएको कपालले गर्दा झन् ठूलो देखिएको टाउको बिस्तारै हल्लायो, छ । उसले मायालाई भन्यो–“तिमीलाई इन्टरनेट हेर्नुपर्‍यो भने आएर हेरे हुन्छ । साइबर गएर पैसा खर्च गरिरहनु पर्दैन । काम नपाउन्जेलसम्म, म काममा गएको बेला दिउँसो पनि आएर कम्प्युटर चलाउन र टिभी हेर्न सक्छ्यौ ।” उसले मायालाई मूलढोकाको चाबी दियो । माया छक्क परी । चिनजान गरेर बोलेको एक घन्टा पनि भएको छैन, किन यो मान्छेले साँचो दियो ? कसरी गरेको होला यत्रो विश्वास ? अन्जान मानिसले साँचो दिनुमा उसकोे कुनै नराम्रो नियत त छैन ? मायाको मनमा यस्ता धेरै प्रश्नहरू एकसाथ नै उठे । उसलाई लाग्यो साँचो लिनु हुँदैन् । विदेशमा केही भइहाल्यो भने ? भोभो लिनु त हुँदै–हुँदैन् । मायाको मनले साँचो नलिने सल्लाह दिए पछि उसले भनी-“भोभो पर्दैन, मलाई इन्टरनेट हेर्नुपर्‍यो भने म तिमी भएको बेलामा आएर हेरुँला नि ।”
“होइन होइन तिमी डराएजस्ती छ्यौ । मसित नडराऊ, म हेर्दा नराम्रो भएपनि मेरो मन सफा छ । मेरो उद्देश्य तिमीले दुःख गरेर कमाएको पैसा साइबरमा खर्च गर्नु नपरोस् भन्ने मात्र हो ।” प्रनोनको कुरा सुनेपछि मायाको कौतुहलतामा केही कमी त आयो तर पनि साँचो ! उसलाई काम नभएको बेलामा कम्प्युटरमा चलाउन पाए त दिन पनि कट्ने, राम्रै हुने थियो भन्ने पनि लागिरहेको थियो । जे होलाहोला दिउँसो प्रनोन काममा गएको बेलामा मात्र आएर हेरे त भैहाल्छ नि भन्ने सोचाइ बनाएर मायाले प्रनोनसित साँचो लिई र प्रनोनलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो कोठातिर लागि ।
भोलिपल्ट खाना खाएर माया फेरि लागी कामको खोजीमा एजेन्सीतर्फ । धेरै एजेन्सीमा दौडिएपछि बल्ल एक ठाउँमा उसले काम पाउने छनक पाई । एजेन्सीले तीनदिन पछि आउने तारिख दिएपछि झिनो आशा लिएर ऊ घर फर्किई । घर आइपुगेपछि प्रनोनको कोठा अगाडि पुगेर ऊ टक्क अडिई । कोठामा पनि उसकोे कुनै खास काम थिएन । प्रनोनको कोठामा पस्न पनि उसलाई डर लागिरहेको थियो । त्यो समयमा प्रनोन त काममा गएको थियो । उसकोे कोठामा ताला लागिरहेकाले अरू कोही हुने चान्स पनि भएन । त्यसैले हिम्मत गरेर उसले आफ्नो कोठाभन्दा पहिले प्रनोनको कोठा नै खोली । तै पनि उसकोे मनमा कताकता डर त थियो नै । सबै कोठा घुमेर हेरी । कोही थिएन, ताल्चा लागेको कोठामा कोही हुुने कुरा पनि त भएन, तैपनि मायाको मनको डर । उसले मूल ढोकामा भित्रबाट ताल्चा मारी र सिधै गएर बसी कम्प्युटरको अगाडि । ऊ कम्प्युटर खोलेर इन्टरनेटमा डुबुल्की मार्न थालेकी मात्र के थिई, समय गएको त पत्तै पाइनछ । प्रनोन आएर बाहिरबाट ढोका खोल्दा पो साँझ परेको थाहा पाई । ऊ जानलाई उठेकी मात्र के थिई, प्रनोनले केहीबेर बस्न भन्यो र अर्को कोठामा पस्यो । प्रनोनको हातमा एउटा झोला थियो । अर्को कोठामा लुगा फेरेर ऊ निस्कियो । उसले अहिले पनि हातमा झोला बोकेकै थियो ।
ऊ मायाको अगाडि आएर बस्यो । प्रनोनले उसकोे होटलबाट खानेकुराहरू लिएर आएको रहेछ । त्यही खानका लागि उसले मायालाई रोकेको रहेछ । मायाले पनि खाजा खाएकी थिइन । तर उसलाई प्रनोनले ल्याएको खानेकुरा खान भने घिन लाग्यो । तर उसले सम्झेर ल्याएको खाजा नखानु पनि कसरी ? त्यो कालो मानिस कालो हात-छिः–छिः, कसरी खानू ? नखाने भन्ने पनि उससित कुनै बहाना भएन । त्यसैले उसले खाजाका लागि नाइँ भन्न सकिन । दुवैले गफ गर्दै प्रनोनले ल्याएका तारेका कुखुराको साँप्रा, एक प्रकारको पाउरोटी र ग्रीन सलाद खाए । मायाले यसबीचमा प्रनोनका बारेमा धेरै कुरा थाहा पाई । ऊ इजरायली केटीसित विवाह गरेर त्यहाँको नागरिक भएको रहेछ । दुई सन्तानको बाबु भैसकेपछि श्रीमतीसित पारपाचुके गरेको रहेछ । कोठाभरि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू फिँजाएर बनाउँदै बसेको प्रनोनले त तीन कक्षासम्म मात्र पढेको रहेछ । मायाको मनमा जिज्ञासा उठिहाल्यो र सोधिहाली–“अनि तिमी साक्षर मात्र भएको मान्छे इलेक्ट्रिसियन कसरी भयौ त ?”
प्रनोनकी श्रीमती पढेलेखेकी महिला थिइ रे । उ सरकारी अफिसमा काम गर्दथी रे । उसले घरमा एउटा कम्प्युटर किनेर ल्याइछ । प्रनोनले त्यो कम्प्युटर चलाएछ । प्रनोनले कम्प्युटर चलाइरहेको देखेर श्रीमती उससित रिसाइछ र दुर्वचन पनि बोलिछ । कम्प्युटर चलाएको निहुँले उठेको झगडाले ठूलो रूप लिएछ । जसको नतिजा–प्रेमविवाहबाट सुरु भएको उनीहरूको दाम्पत्य जीवनको अन्त्य पारपाचुकेबाट भएको रहेछ । कम्प्युटर के हो यस्तो चिज जसले मेरो घर, श्रीमती, बच्चा, सबैलाई मैले गुमाउनुपर्‍यो भनेर उसलाई ज्यादै नरमाइलो लाग्यो रे । अनि उसले चोर बजारमा गएर दुईवटा बिग्रिएका कम्प्युटर किनेर ल्याएछ । दुवैका पाटपुर्जा खोलेर बनाउँदै गएछ । दुईवटा कम्प्युटरका सामान जोडेर उसले एउटा कम्प्युटर बनाएछ । कम्प्युटर चलाउँदा बिग्रन्छ भनेर छुन नदिएको निहुँबाट पारपाचुकेमा पुगेको प्रनोनले बिग्रिएको कम्प्युटर नै बनाइदिएछ । “त्यो मेरो जिन्दगी कै पहिलो सफलता लागेको थियो मलाई ।” प्रनोनले आँखाभरि आसु पार्दै मायालाई सुनाएको थियो । एउटा कम्प्युटर बनाएर चलाएपछि उसमा हौसला बढेछ । उसले बिग्रिएका कम्प्युटर ल्याउँदै बनाउँदै बेच्न थालेछ । दुई कम्प्युटरबाट एक कम्पुटर राम्रो बनाएर इलेक्ट्रोनिक दुनियाँमा हात हालेको प्रनोन बिस्तारै टिभी, रेडियो, मोबाइल, घडी सबै बनाउन सक्ने भएछ । “बिग्रेका सामान बनाइदिएर एकातिर मेरो आम्दानीको स्रोत बढ्यो भने म यो दुनीयाँमा पनि परिचित हुँदै गएँ । यसबाट राम्रो आम्दानी भएपनि मैले मेरो पुरानो पेसा छोडेको छैन ।”–प्रनोनले मुस्कुराउँदै सुनायो मायालाई ।
पुरुषको सफलतामा महिलाको ठूलो हात हुन्छ भन्छन् । प्रनोनको सफलतामा पनि उसकी श्रीमतीकै हात रहेछ । तर कस्तो हात हो ! अलि उल्टै परेजस्तो । श्रीमतीकै कारणले ऊ पनि इलेक्ट्रिसियन त बन्यो नि ! तीनदिन पछि माया फेरि पुगी एजेन्सीमा । हिब्रू मात्र बोल्न वा बुझ्न सक्ने हुँदी हो त उसलाई काम पाउन कुनै गाह्रो थिएन । भाषाको समस्याले गर्दा उसलाई काम पाउन गाह्रो भइरहेको थियो । तैपनि एजेन्सीले उसलाई काम पनि खोजिदियो–उसकोे चाहना अनुरूप अङ्ग्रेजी बोल्ने परिवारमा । काम गर्न जानुपर्ने ठाउँको ठेगाना र फोन नम्बर दिएर एजेन्सीले मायालाई भन्यो–“तिम्रो इन्टरभ्यु लिने भनेका छन्, तिमी कहिले जान्छ्यौ ? भन, म फोन गरिदिन्छु ।” मायाले एजेन्सीले दिएको कागज हेरी, त्यसमा लेखिएको ठाउँको त यसअघि उसले नाम पनि सुनेकी थिइन । प्रनोनले सहायता गर्ला कि भन्ने सोचेर भोलिपल्ट बिहान मात्र जाने बताई उसले एजेन्सीको मानिसलाई । त्यो मानिसले त्यहीँबाट फोन गरिदियो । ऊ घर फर्किई । घर आएर फेरि कम्प्युटरकै अगाडि पुगी । त्यो दिन प्रनोन दिउँसै घर फर्कियो ।
“किन चाँडो आएको कामबाट ? के भयो ?”— मायाले प्रश्न गरी ।
“काम छोडिदिएँ आजबाट ।”
“ओहो, के भयो ? किन त ?”
“साहुसित झगडा भयो । म जस्तो पुरानो कामदारको पनि विश्वास गरेन उसले । जहाँ विश्वास हुँदैन्, त्यहाँ काम गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसैले छोडिदिएँ ।” “तिम्रो काम के भयो त ?” प्रनोनले प्रश्न गर्‍यो । मायाले प्रनोनलाई एजेन्सीले दिएको कागज देखाउँदै भनी- “मलाई भोलि यो ठेगानामा जानु छ । तर मलाई थाहा छैन, कहाँ हो कसरी जाने हो ? के तिमी मलाई पुर्‍याइदिन सक्छौ ?” प्रनोनले किन सोधेकी होला जस्तो गर्‍यो र मुस्कुरायो मात्र, केही जवाफ दिएन ।
भोलिपल्ट उसैले मायालाई पुर्‍याइदियो इन्टरभ्यू दिनुपर्ने घरमा । बीस मिनेटजतिको अन्तर्वार्ता पछि उसले काम पाउने भई । काम थियो बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म । उसले यो काम गरेमा रातमा सधैँ एक्लै डेरामा बस्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर पनि अङ्ग्रेजी बोल्ने परिवार भएकाले मायाले नाइँ पनि भन्न चाहिन । मायाले काम शुरु गरी । माया दिनभर काममा जान्थी भने प्रनोन कामको खोजीमा । घरमा बस्ने तला एउटै–माथिल्लो तला भएकाले उनीहरू प्रायः घरबाट निस्कँदा र पस्दा सँगसँगै हुन्थे । कामबाट फर्किएपछि जो पहिले घर पुग्दथ्यो, अर्को आउने समयको जानकारी फोनबाट लिएर चिया बनाउथ्यो र अर्को साथीको प्रतीक्षा गर्दथ्यो । अनि चिया पिएर प्रनोनकै गाडीमा उनीहरू घुम्न निस्कन्थे । इजरायल सानो देश भएकाले एउटा छेउबाट अर्को छेउको सिमानासम्म पुग्न छ घण्टाको ड्राइभिङ गरे पुग्ने । प्रायः सात बजेदेखि दश बजेसम्म ती दुई घुमि नै रहेका हुन्थे । हप्तामा दुईदिन मायाको बिदा हुन्थो, एक दिन त डेरामा सबै साथीहरू बस्न आउने हुनाले डेरा नै रमाइलो हुन्थ्यो । ऊ त्यो दिन डेरामै बस्न रुचाउँथी । अर्को दिन प्रनोन र ऊ टाढाटाढाका शहर घुम्न निस्किन्थे । माया बेलुका चाँडै घर फर्कने, प्रनोन काम नपाएको बेगारी । प्रनोनले मायालाई त्यो समयमा इजरायलका सबै शहर, गाउँ, प्रख्यात ठाउँ, कलकारखानादेखि किबुज (खेतीगर्ने ठाउँ) सबै देखाइदियो । मायाले इजरायलमा नदेखेको कुनै शहर या कुनै क्षेत्र रहेन । प्रनोन अङ्ग्रेजी राम्ररी बोल्दथ्यो तर लेख्न उसलाई ए बी सी डी पनि नआउने । ऊ मायालाई हिब्रू बोल्न सिकाउँथ्यो भने मायाले उसलाई अङ्ग्रेजी लेख्न । ती दुई एक अर्काको गुरु पनि बनेका थिए, त्योबेला ।
पहिलो दिन प्रनोनलाई देख्दा डराएर माया पछाडि सरेकी थिइ भने बोल्न पनि अति डर लागेको थियो ! अरू नेपालीहरू त शायद नै प्रनोनसित बोल्थे होलान् । तर प्रनोन यत्ति चाँडो मायाको यस्तो मित्र बन्न पुग्यो कि ऊ त्यसलाई बयान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगी । उनीहरूका बीचमा धेरैजसो गफ इलेक्ट्रोनिक्सका विषयमा हुन्थ्यो भने आआफ्नो देश, संस्कृति, संस्कार, राजनीतिका बारेमा पनि कुरा चल्दथ्ये । गफको कुनै अन्त्य थिएन । माया उसकोे अपार्टमेन्टमा एक्लै, ऊ उसकोे अपार्टमेन्टमा एक्लै । प्रनोन मायासित त्यति नजिक हुँदा पनि उसले मायालाई जहिले पनि आदर नै गरेको मायाले महसुस गरेकी थिई । प्रनोन एउटा पुरुष, त्यो पनि पारपाचुके, माया एक्ली ऊभन्दा त राम्री पनि थिई । सबै थाहा भएर पनि उसले मायाप्रति नराम्रो नियत राखेको मायाले कहिल्यै महसुस गर्नु परेन । त्यसैले पनि प्रनोन दिन प्रतिदिन मायाको असल मित्र बन्दै गयो ।
माया आफ्नो देशमा धनी परिवारकी सदस्य । विदेश जाने चाहनाले उसलाई इजरायल पुर्‍याएको थियो । परिवारका सबै सदस्यहरूले नजान भन्दाभन्दै विदेश जाने रहरमा ऊ पुगेकी थिई इजरायल । तर त्यहाँको काम त ओहो ! मायाले कल्पना पनि गर्न सकेकी थिइन । विदेशमा गएर त्यति निम्नस्तरको काम पनि गर्नुपर्ला भनेर । छिः छिः ,चर्पी सफा गर्ने, दिशा पिसाब गरेको सफा गरिदिनुपर्ने । यस्ता काम गर्न त ऊ विदेशिएकी थिइन । कामको स्वरूपले गर्दा पनि इजरायलको काममा माया एड्जस्ट हुन सकिरहेकी थिइन । प्रनोनकै अनुभव, सल्लाह र सुझावले मायामा आत्मबल जगाइदिएको थियो । उसले पनि रेष्टुरेन्टको भाँडा माझ्ने कामबाट आफ्नो इजरायलको बसाइ शुरु गरेको थियो ।
रुपले प्रनोन जति नराम्रो थियो, उसको आत्मा ठीक विपरित थियोे । अरूले उसलाई बाहिरी रूप र शारीरिक बनोटका कारण नराम्रो देखेका थिए भने मायाले उसकोे भित्री मन राम्रो देखेकी थिई ।
एक दिन प्रनोनले केही भन्नु छ भन्दै मायालाई कोठामा बोलायो । केही बेरपछि माया प्रनोनको कोठामा गई । प्रनोन मनको कुरा भन्न धक मानिरहेको थियो । केही भन्न भनेर बोलाएको अनि बोल्न धक मानेको देख्दा मायाको मनमा चिसो पस्न गयो । लौ मार्‍यो, यसले मसित के पो भन्न लाग्यो भनेर ऊ अलि डराई पनि । मायाले धेरै कर गरेर सोधेपछि उसले भन्यो-“केही समय पहिले अशोकाको फोन आएको थियो । म त्यही बारेमा तिमीसित कुरा गर्न चाहन्थ ।” मायाले सन्तोषको सास लिँदै भनी –“को अशोका ?”
“एक जना श्रीलङ्कन महिला,”उसले तुरुन्त जवाफ दियो । प्रनोनको र अशोकाको भेट काम गर्ने ठाउँमा भएको रे । अशोका वेटर्स, ऊ शेफ । अशोकाले उसलाई काममा सघाइदिने, उसले खाए–नखाएको विचार गर्ने गर्दिरहिछ । पछि अशोका जेरुशेलम गइछ, राम्रो काम पाएर । त्यसपछि पनि उनीहरूबीचमा फोन वार्ता भने भइरहेको रहेछ । प्रनोनले अशोकालाई प्रेम प्रस्ताव राख्न चाहेको धेरै भइसकेको रहेछ । तर आफ्नो शारीरिक बनोट, रूप र दुई बच्चाको बाबु भनेर नाइँ भनी भने के गर्ने ? भएको एउटा मित्र पनि गुम्छे भनेर उसले भन्न आँट गर्न सकेको रहेनछ । प्रनोनले आफ्नो मनका कुरा सबै मायाका अगाडि पोख्यो । “अशोकाको मनमा के छ तिमीले बुझ्न सकेनौ त ?” उसले प्रनोनलाई प्रश्न गरी ।
“माया, तिमीले चाह्यौ भने अशोकासम्म मेरो कुरा पुराइदिन सक्छ्यौ । उसकोे मनमा के छ, तिमीलाई बुझ्न सजिलो पनि हुन्छ । एक महिलाले महिलासित नै खुलेर कुरा गर्न सक्छे । त्यसै कारण कृपया मलाई यत्ति सहयोग गरिदेऊ न !” मायालाई प्रनोनले उसलाई लगाएको गुन तिर्ने बेला आएको जस्तो लाग्यो र उ सहयोग गर्न तयार भई । मायाको बिदाको दिन अशोकालाई भेट्न जाने व्यवस्था मिलायो प्रनोनले । उनीहरू भनेकै दिन अशोकाकहाँ पुगे । एउटा घरको अगाडि पुगेर प्रनोनले गाडी रोक्यो । पुरानो तीनतले घर । उनीहरू सरासर घरको माथिल्लो तलामा पुगे । ढोका अगाडि उभिएर प्रनोनले डोरबेल बजायो । एउटी सानी, काली महिलाले ढोका खोलिन् । उनले लगाएको हाफपाइन्ट र भेस्टले उनलाई झन् सानो देखाउन मद्दत गरिरहेको थियो । फुच्ची प्रनोनलाई देख्नासाथ मुस्कुराई र हाई भनी । प्रनोनले मायातिर हेर्दै भन्यो अशोका । ओहो, अशोका ! माया छक्क परी । प्रनोन र अशोकाको जोडी नमिल्नेजस्तो देखी मायाले । ऊ मोटो अग्लो, अशोका सानी दुब्ली फुच्ची । उसले ढोकामा उभिएरै माया र अशोका विच परिचय गरायो । अशोकाले भित्र आउन अनुरोध गरी । तिनै जना भित्र पसे । एउटा कोठा, छेउमा बारेर भान्सा, अर्को छेउमा बाथरूम । एक जना मात्र सुत्ने बेड । एउटा सोफा र छेउमा सानो डाइनिङ टेबुल । कोठा सफा थियो । अशोकाले भान्साको छेउमा भएको सानो फ्रिजबाट तीनवटा कोकाकोला निकाली । अशोका पनि कामबाट बिदा लिएर बसेकी रहिछ । माया घरी प्रनोनलाई त घरी अशोकालाई हेर्दै अमिताभ बच्चनको फिल्म लावारिसको गाना सम्झिन पुगी-
जिसकी बिबी छोटी, उसका भी बडा नाम है,
गोदीमे बिठालो, बच्चेका क्या काम है ...
अशोकाको शरीर भन्दा प्रनोनको शरीर बीस भाग बढी थियो होला । कसरी कुरा गर्ने ? माया त चिन्तित भई । बिस्तारै ऊ अशोकासित कुरा गर्न थाली, अरू नै विषयमा । मायामा मान्छेसित कुरा गरेर तान्न सक्ने खुबी थियो । त्यही अनुरूप अशोका पनि एक दुई घन्टामै मायासित खुलेर कुरा गर्ने भइसकेकी थिई । उनीहरूको गफ सुन्दा लाग्दथ्यो बर्षौं पछि दुई साथी भेटिएका छन् । अब माया अशोकासित कुरा गर्न सक्ने अवस्थामा पुगी । उसले निहुँ पारेर प्रनोनलाई तरकारी लिन पठाई । प्रनोन बाहिर निस्किएपछि मायाले अशोकासित प्रनोनका बारेमा कुरा शुरु गरी । अशोकाले प्रनोनको धेरै नै तारिफ गरी । अब मायाको पालो थियो, उसले अनेक भूमिका बाँधेर अशोकालाई प्रनोनको विचार सुनाई । अशोकाले के भन्ली भनेर धेरै नै हिचकिचाउँदै उसले डराउँदै कुरा राखेकी थिई । अशोका अलि लजाउँदै अलि मुस्कुराउँदै राजी भई । खाना खाएर उनीहरू निस्किए जेरुसेलम घुम्न । अशोका र प्रनोनले पूरै जेरुसेलम देखाए मायालाई । चार बजेतिर आफ्नो शहर तेलभिव फर्किएका थिए तीनै जना त्यो दिन । मायालाई प्रनोनले उसकै घरमा खाने निमन्त्रणा दियो । त्यो रात अशोकाले विरियानी पकाएकी थिई । प्रनोनले त केके हो केके ! त्यो रात धेरै रमाइला गफहरू भए ।
एक दिन शुक्रबार प्रनोनकोे टिभीमा इन्डियन प्रोग्राम आएछ । उसले मायालाई देखाउनुपर्‍यो भनेर दौडँदै आएर मायाको अपार्टमेन्टको बेल बजायो । मायालाई खोजेछ, ऊ बाथरूममा नुहाउन पसेकी थिई, फर्किएछ । माया बाथरूमबाट बाहिर निस्किएपछि साथीहरूले कालेले खोज्दैआएको खवर गरे । किन रे ? मायाले साथीहरूसित प्रश्न गरी । उनीहरु कसैले पनि प्रनोनसित किन भनेर सोधेका थिएनन् । माया चिसै कपालले प्रनोनको कोठामा गई । काले त झन् कालोनीलो भएर निनाउरो मुख पारेर बसेको थियो । “तिमीलाई आज के भयो बिसन्चो भएको जस्तो अनुहार छ नि ?” मायाले प्रनोनलाई सोधेकी मात्र के थिई, उसले केही जवाफ नै नदिई मायालाई कुर्सीमा बस्ने इसारा गर्‍यो । “तिमीलाई भेटेको पहिलो दिन नै मैले मेरो कोठाको चाबी किन दिएँ भनेर तिमीलाई अचम्म लागेको थियो नि, त्यसको जवाफ म आज दिन्छु ।” ऊ मौन भएर प्रनोनको कुरा सुन्न लागि ।
“म विगत तीन वर्षदेखि यो अपार्टमेन्टमा बस्दै आएको छु । पाँचतले यो घरको सबभन्दा माथिल्लो तलामा हामी बस्दछौं । म काममा जाँदा र आउँदा भर्‍याङमा मेरो भेट नेपाल, इन्डिया, श्रीलङ्का, फिलिपिनलगायत विभिन्न देशका मानिससँग हुन्थ्यो । हाम्रो घरमा लिफ्ट नभएकाले धेरै मानिस काममा जानुपर्ने समयमा र आउँदाको समयमा भर्‍याङ्मा भेट हुनु स्वभाविक पनि हो । सधैँ भेट हुने हुनाले म उनीहरूलाई हाई, हेलो गुडमर्निङ भनेर अभिवादन गर्दथेँ । हामी बसेको यो घरमा पाँच सयभन्दा बढी मान्छे होलान् । मैले तीमध्ये धेरैलाई अभिवादन गरें तर आजसम्म मलाई कसैले पनि मेरो अभिवादनको जवाफ दिएका थिएनन् । एकै समयमा आउने जाने गर्दा प्रायः सवै मानिससित मेरो भेट हुने हुनाले नबोले तापनि मेरा लागि भने धेरै अनुहार अपरिचित पनि थिएनन् । तर ती परिचित अनुहार पनि मलाई देख्दा-कि फर्केर कोठा भित्रै पस्दथे कि अर्कोतिर मुख फर्काएर मलाई नदेखेजस्तो गरेर हिँड्दथे । यो घरमा यत्तिका मान्छे बस्ने भए तापनि मसित बोल्ने मान्छे मैले एक जना पनि पाएको थिइनँ, यो तीन वर्षमा ।
अरूबाट सधैँ त्यस्तो व्यवहार पाएपछि म मात्र किन अभिवादन गरिरहने ? यो घरमा पस्दा या निस्कँदा म एक्लै छु, यो घरभरिमा भन्ने सोचेर हिँड्न थालिसकेको थिएँ । यस्तो बेलामा तिमीले मलाई प्रश्न गरेकी थियौ, “ह्वाट ह्यापेन्ड” मैले तिम्रो प्रश्नको जवाफ दिन सकेको थिइनँ त्यो बेला । मेरो मनमा अचम्म र खुसी एकैपल्ट आएको थियो । तिमी मसित बोल्यौ भनेर । तिमी पुलिस देखेर डराएर मलाई के भयो भनेर सोधेकी थियौ होला । तर मेरा लागि त तिम्रो आवाज नै पहिलो आवाज थियो यो घरमा । तिमी तर्किनौ मसित बोल्यौ । तिमीले मसित हँसिलो अनुहारले निडर भएर कुरा गरेको अनुभव गरेँ मैले । तिमीले ढोकामा उभिएर पहिलो दिन मसित गफ गर्दाको तिम्रो त्यो अनुहार म मेरो जिन्दगीको अन्तिम घडीसम्म पनि बिर्सन सक्दिनँ । त्यत्तिमात्र कहाँ हो र ! तिमीले त मैले पकाएको चिया पनि पियौ, म त्यो समयमा कत्ति खुसी थिएँ । तिमी मसित चिया पिउँदै गफ गरिरहेकी थियौ तर म कल्पनाको अर्कै संसारमा थिएँ । यो घरमा पनि मसित बोल्ने कोही मान्छे छ, यो मान्छेसित मित्रता गर्न पाए पनि हुनेथियो भन्ने मेरो मनमा लागिरहेको थियो । त्यही बेला तिमीले इन्टरनेटका बारेमा सोध्यौ । म तिमीसित फेरि पनि बोल्न पाऊँ, यो घरमा कोही मानिस मसित पनि बोल्ने छ है भन्ने मेरो मनमा परिरहोस्, म यही चाहन्थें । तिम्रो त्यो हाँसेर बोल्ने बानी र मसितको व्यवहार मलाई असाध्यै मन परेको थियो । मित्रता त म चाहन्थेँ तर कसरी भनौँ ? भनिनँ भने फेरि भेट होला न होला ! फेरि भेट भइहाल्यो भने पनि आजको जस्तो बोलिनौ भने ? यस्तै कुरा मनमा खेलिरहेको बेला इन्टरनेटको कुरा तिमीले भिक्यौ । म त्यो मौका किन गुमाउन चाहन्थें र ? इन्टरनेटको लोभमा परेर साँचो लियौ भने त तिमी मेरो कोठामा आइरहने भयौ । अनि त मैले तिमीसित बोल्न पनि पाउने भएँ नै । मात्र तिमीसित बोल्नका लागि कर गरेर तिमीलाई मैले साँचो थमाएको थिएँ । आज म मेरो टिभीमा चलिरहेको तिम्रो देशको कार्यक्रम जस्तो लागेर तिमीलाई बोलाउन गएँ । मैले बेल बजाएपछि त्यहाँ ढोका त खुल्यो तर मैले तिम्रो बारेमा सोध्दा कोही पनि मसित बोल्न पनि चाहेन । सब जना ढोकाको छेउमा आए र फर्किए । तिमीजस्तो त अरू नेपाली पनि हुँदारहेनछन् । आज म फेरि अतीतमा नै पुगेर तिम्रो ढोकाबाट फर्किएँ । तिमी जति दिन इजरायलमा हुन्छ्यौ मसित बोल्न नछोड्नु है !”प्रनोनको आँखा रसाएको थियो । उसको स्वर भारी भएको मायाले परैबाट थाहा पाइसकेकी थिई ।
ओहो, मान्छेले मान्छेलाई गर्ने व्यवहारमा यत्रो भिन्नता ? माया पनि विचलित हुन पुगी, प्रनोनको कुरा सुनेपछि । मायाले धेरै आकाश पाताल देखाएर उसलाई सम्झाएपछि उ अलि नर्मल भयो । माया आफ्नो कोठातिर लागी । प्रनोनको सल्लाहअनुसार काम गर्दै गएपछि एक दिन मायाले अमेरिकाको भिसा पनि पाई । भिसा कसरी पाउने भनेर मायालाई सिकाउने व्यक्ति पनि प्रनोन नै थियो । भिसा पाएको राती प्रनोन र अशोकाले मायालाई रात्री भोजनका लागि एउटा होटलमा लिएर गएका थिए । खाना खाँदै गर्दा अशोकाले मायालाई सोधेकी थिई-
“दिदी, अमेरिका जाँदा हामीबाट के चाहनुहुन्छ ? के उपहार दिऊँ तपाईलाई ?”
“म जे माग्छु दुवै जनासित माग्छु, दुवैले दिनुपर्छ । दिन्छौ ?”
“के ? के ?” दुवैबाट एकैसाथ प्रश्न आयो ।
“तिमीहरूको विवाह हेर्न चाहन्छु म त्यो नै मेरा लागि मतना (हिबू्र भाषामा उपहार) हुनेछ । म तिमीहरूको विवाहको साक्षी बस्न चाहन्छु ।”क्या अचम्म दुई शहरमा बस्ने, दुईतिर काम गर्ने मानिसले केके सल्लाह गरे-भोलिपल्ट नै कोर्टम्यारिजका लागि निवेदन दिन दुवै लागे श्रीलङ्कातिर । दुईतीन दिनपछि प्रनोन फर्कियो । अशोका उतै बसी । केही समय पछि प्रनोन फेरि गयो र अशोकालाई श्रीमती बनाएर मायाको सामु लिएर आयो । मायालाई खुसीखुसी बिदा गर्नका लागि अशोका गरिरहेको काम छोडिदिएर श्रीलङ्का गएकी रहिछ । कहाँकहाँको मानिस प्रनोन र अशोका मायालाई कत्ति माया गर्ने भइसकेका थिए ।
इजरायलबाट अमेरिका जाने बेलामा मायालाई एयरपोर्टसम्म छोड्न आउने कोही नेपाली साथी थिएनन् । ती नव दम्पत्ति नै मायालाई बिदा गर्न आएका थिए । मायाको इमिग्रेशन भैसकेपछि भित्र पस्नेबेलामा प्रनोनले भन्यो—“तिम्रो राम्रो होस् । तर माया, आज मलाई मेरो एउटा असल मित्र गुमाएको जस्तो लागेको छ ।” मायाले प्रनोनको आँखामा छछल्किएका आँसु देखिसकेकी थिई । अशोका त अघिदेखि रोइरहेकी थिई । भेट्नु रमाइलो हुन्छ, बिछोडिनु गाह्रो । मायालाई पनि गाह्रो भइरहेको थियो । तर पनि मायाले आपूmलाई सम्हाल्दै भनी- “भोभो प्रनोन, त्यसो नभन, म तिमीलाई कहिल्यै बिर्सन्नँ । मेरो जीवनमा तिमीहरूलाई बिर्सनु असम्भव हुनेछ । मित्रताको लागि नजिक नै हुनु पर्छ भन्ने छैन, टाढाबाट पनि गहिरो मित्रता कायम हुन्छ ।”
आज धेरै दिन पछि प्रनोेनलाई च्याटमा भेटी मायाले । ऊ इन्टरनेट सन्जाललाई धन्यवाद नदिइरहन सक्दिन । जसले उसका धेरै साथीहरूलाई च्याटमार्पmत नजिक बनाइदिएको छ । इन्टरनेट नभए पनि उसले पत्रमार्फत मात्र प्रनोन र अशोकाको खबर पाउँथी होली । तर पनि छिटो होइन । अनलाइनमा प्रनोन बोल्न आयो । “किन कता हराएको” मायाले उसलाई सोधेकी मात्र के थिई । प्रनोनले एक छिन ल भनेर अशोकालाई बोलायो । अशोका आई । उसकोे काखमा सानो बच्चा थियो । अशोका र प्रनोनले मायालाई उनीहरूको सात दिनको छोरो देखाउँदै भनेका थिए-“माया लिउ तिम्रो मतना ।”
सिकलसेल एनिमियाः थारु समुदायमामात्रै देखिएको रोग, यी हुन् लक्षण (भिडियो)
प्रदेश–७ मा तीन महिनाका लागि १ अर्ब २ करोडको बजेट आइतबार
अस्पतालहरुमा बिरामीको चाप बढ्यो, सावधानी अपनाउन चिकित्सकको सुझाव
प्रहरी र सरकारी वकिलको समन्वयात्मक भूमिका जरुरी : कामु प्रधानन्यायाधीश
जिप दुर्घटनामा एक महिलाको मृत्यु, तीनजना घाइते
देउवाले दिए चेतावनी, ‘निरंकुशताविरुद्ध लड्नका लागि तयार हुनोस्’